PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Kuzocaca namhlanje ngamachweba
Kuzocaca namhlanje ngamachweba
Isolezwe - 2017-10-12 - IZINDABA - BONISWA MOHALE noPHILI MJOLI
KUZOCACA emini ukuthi amachweba akwaZuluNatal ayavulwa yini ngoba amathimba abhekelele ezokuphepha esematasa nophenyo.
Umoya obuhambisana nemvula ngoLwesibili ududulele imikhumbi ngasosebeni echwebeni laseThekwini nelaseRichards Bay.
Izolo uMnuz Sobantu Tilayi, oyi-Chief Operations Officer kwaSamsa, uthe iwu-12 imikhumbi ephazamisekile ngenxa yemvula nomoya.
Uveze ukuthi amachweba aKwaZulu-Natal selokhu evalwe ngoLwesibili. Kuzocaca namhlanje ukuthi ayavulwa yini njengoba besacwaninga isimo sokuphepha.
“Imikhumbi iphusheleke osebeni ngenxa yomoya onamandla kodwa sesiyibuyisele olwandle ukuze ikwazi ukuthulula impahla ebeyilethe echwebeni,” kusho uTilayi.
UNkk Shulami Qalinge, isikhulu esiphezulu sakwaTransnet Transnet National Ports Authority (TNPA), uthe ayikho imikhumbi ezohamba kuze kube amathimba abo anelisekile ngezokuphepha. UMnuz Moshe Motlohi, umphathi wechweba laseThekwini, uthe sebebuyisele imikhumbi esimeni esiyiso naleyo ebibhajiwe isibuyiselwe olwandle. Uthe bazolungisa nezindawo zokupaka imikhumbi. Namabhanoyi amancane amatasa nocwaningo olubheka ukuthi ichweba liphephile.
Uphethe ngokuthi bazokwazi ngabo-12 ukuthi isimo sesiyabavumela yini ukuba basebenze uma amathimba abo abhekelele ukusebenza kwamachweba nezokuphepha esethule ucwaningo lwawo.
Khonamanjalo bekungakasetshenzwa enkampanini ekhiqiza izimoto iToyota South Africa eseProspecton eSiphingo emuva kokuthi kungene amanzi alimaza imishini nezimoto. Izikhulu zale nkampani zithe zizokwazi namhlanje ukuthi isimo sizobuyela nini kwesijwayelekile.
Okhulumela iPrasa Metrorail, uNkk Isabel Westhuizen, uthe izolo abacwaningi babo basahlola ukuthi umonakalo mungakanani kanti abazi ukuthi olayini bezitimela bangase bavulwe nini eKZN.
Bathe abantu abazame ezinye izinto zokuhamba ukuze bafinyelele lapho beya khona ngoba ngeke bathuthe wonke umuntu ngamabhasi. Uthe kungenzeka bamemezele namuhla noma kusasa ukuthi yimiphi imizila okungenzeka ivulwe.